HomeArimaha Qoyska5 Calaamad Oo Aad Ku Ogaan Karto In Jacayl Ku Hayo
Sidee Ayaad ku ogaan kartaa in jacayl ku hayo oo aad qof si dhab ah u jeclaatay, laakiin waxa ku haya uuna ahayn cajabin ama wax la mid ah?
Waxa dhici karta in ay waxyaabuhu isaga kaa darsamaan oo aad kala saari kari waydo in waxa ku haya yahay jacayl dhab ah ama kaliya dareen cajabin ah.
Hadaba si aad u ogaato wakhtiga aad si dhab ah u jeclaatay qof waxa aan halkan kuugu soo gudbinaynaa 5 wado oo aad ku ogaan karto arintaas.
1.In Aad Naftaada U Daryeesho Ka Duwan Ama ka fiican sidii hore:
Hadii aad muuqaaga ama jidhkaaga u daryeesho si ka fiican sidii hore oo aad mar walba doonayso in ay soo baxdo quruxdaadu hadii ay tahay labiskaaga oo aad qurxiso ama jidhkaaga kale oo aad daryeesho waxa shaki la,aan ku haya jacayl ama waxa aad jeclaatay qof aad isku dayayso in uu kaa helo ama aad qanciso mar walba.
2.In Aad Dareento Farxad Sabab La,aan ah:
Waxa aad dareemaysaa farxad aad u badan adiga oo aan garanayn ama aan sheeki karin sababta aad la faraxsantahay adiga oo badalay dhaqankaagii markii hore isna arki doona adiga oo iska faraxsan mar walba waliba iska cafinaya qof walba oo khalad kaa gala.
3.In Aad Mar Walba Doonto In Aad Aragto Qofka Aad Jeceshahay:
Waxa dooni doontaa in aad wakhti badan la qaadato qof kaas oo aad waliba doonayso in aad la qaadato sheekaysi adiga oo xitaa jari doona balamo aad lahayd si aad qofkaas ula hadasho ama ula kulanto.
4.In Aad Ka Tagto Caadooyin Aad Horay U Lahayd:
Waxa aad dareemaysaa adiga oo iska dhaafaya ama ka tagaya caadooyin aad horay u samayn jirtay ama waxyaabo aad dooni jirtay in aad samayso ama samayn jrtay adiga oo qaadanaya fikiro ka duwan kwuii markii hore.
5.Tamar Aan Xad Lahayn:
Waxa aad dareemaysaa in ay kugu jirto tama aan xad lahayn adiga oo noqonaya qof fir-fircoon oo aan marna ka daalayn waxyaabaha uu qabanayo ama danahaaga gaarka ah.
5 Arimood Oo Aad U Samayn Karto Gacalisadaadaas Hadii Aad Doonayso In Nafteeda Kaa Jeclaato
Asc wll waa i qanciyeen erayadaada